Wararka - Qalabka ayaa cirka isku shareeray. Xafaayadaha, gogosha fayodhowrka iyo tirtirka qoyan miyaanay qiimo kordhin doonin?
Qalabka ayaa cirka isku shareeray. Xafaayadaha, gogosha fayodhowrka iyo tirtirka qoyan miyaanay qiimo kordhin doonin?
Sababo kala duwan awgood, silsiladda warshadaha kiimikada ayaa cirka isku shareertay, iyo qiimaha daraasiin alaabada ceeriin ee kiimikada ah ay sare u kaceen. Warshadaha wax soo saarka fayadhowrka ayaa wali leh culeyska sanadkaan waana mid si toos ah u saameynaya.
Qaar badan oo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha alaabta ceyriinka ah iyo kuwa kaabayaasha ah (oo ay ku jiraan polymer, spandex, dhar aan tolmo wanaagsan lahayn, iwm) ee warshadaha nadaafadda ayaa ku dhawaaqay kororka qiimaha. Sababta ugu weyn ee kororka ayaa ah yaraanta alaabta ceeriin ee korka ama kororka joogtada ah ee qiimaha. Qaarkood xitaa waxay dhaheen kahor intaan amarka la saarin Waxay ubaahantahay in dib loo gorgortamo.
Dad badan ayaa mala awaalay: Qiimaha kor u kaca ayaa kor u kacay, waraaqda kororka qiimaha ee soo saaraha waxsoosaarka dhammeeyay miyuu ka dambeyn doonaa?
Waxaa jira wax run ah oo ku saabsan mala-awaalkan. Ka fikir qaabdhismeedka iyo alaabta ceyriinka ee xafaayadaha, gogosha nadaafadda, iyo masaxyada qoyan.
Masaxaadda qoyan badanaa waa dhar aan tolmo lahayn, halka xafaayadaha iyo gogosha nadaafaddu guud ahaan leeyihiin saddex qaybood oo waaweyn: lakabka dusha sare, lakabka nuugaya, iyo lakabka hoose. Qaab-dhismeedyadan waaweyn waxay ku lug leeyihiin qaar ka mid ah alaabada ceyriin ee kiimikada ah.
1. lakabka dusha: kororka qiimaha dharka aan tolmo wanaagsan lahayn
Dhar aan-tolmo lahayn ma aha oo kaliya qalabka dusha sare ee xafaayadaha iyo gogosha nadaafadda, laakiin sidoo kale waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee masaxa qoyan. Dhar aan tolmo lahayn oo loo isticmaalo alaabooyinka nadaafadda ee la tuuri karo ayaa ka samaysan fiilooyin kiimiko ah oo ay ka mid yihiin polyester, polyamide, polytetrafluoroethylene, polypropylene, fiber fiber, iyo fiber fiber. Waxaa lagu soo waramayaa in walxahaan kiimikada ah ay sidoo kale kor u kacayaan qiimaha, sidaa darteed qiimaha dharka aan la tolanayn ayaa hubaal ku kici doona korkiisa, isla sababtaa awgeed, alaabooyinka la dhammeeyay ee alaabada fayadhowrka la tuuri karo ayaa sidoo kale kor u kici doona.
2. Lakabka nuugida: qiimaha walxaha nuugaya ee SAP wuu kordhayaa
SAP waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka kooban lakabka nuugaya ee xafaayadaha iyo gogosha nadaafadda. Cusbi-biyo-nuugista Macromolecular waa polymer leh sifooyin biyo-nuugis ah oo ay ku milmaan monomers-yada hydrophilic. Monomer kan ugu caansan uguna raqiisan waa acrylic acid, propylene-ka waxaa laga soo qaatay dildilaaca batroolka. Qiimaha batroolka ayaa sare u kacay, iyo qiimaha aashitada loo yaqaan 'acrylic acid' Kadib kororka, SAP ayaa si dabiici ah u kici doonta.
3. Lakabka hoose: kororka qiimaha maadada polyetylen
Lakabka hoose ee xafaayadaha iyo gogosha nadaafadda waa filim isku dhafan, oo ka kooban filim neefsasho hoose leh iyo maro aan tolmo wanaagsan lahayn. Waxaa lagu soo waramayaa in filimka neefsashada hoose uu yahay filim caag ah oo laga soo saaray polyetylen. (PE, mid ka mid ah noocyada waaweyn ee balaastigga ah, waxaa laga soo sameeyaa qalabka polyetylen Polymer.) Iyo ethylene, oo ah tan ugu badan ee loo isticmaalo badeecada loo yaqaan 'petrochemical', ayaa inta badan loo isticmaalaa in lagu sameeyo maadada caaga ka sameysan ee polyetylen. Saliida ceyriin waxay muujineysaa isbedel kore, iyo qiimaha xuubka neefta leh ee loo adeegsado polyetylen sida maadada ceyriinka ah ayaa laga yaabaa inay sare u kacdo maadaama qiimaha polyetylen kor u kaco
Kordhinta qiimaha alaabta ceeriin ah ayaa si lama huraan ah cadaadis u saari doonta kharashka soo saarayaasha alaabada dhammeeyay. Cadaadiskaan, ma jiraan wax ka badan laba natiijooyin:
Mid waa in soosaarayaasha waxsoosaarka dhammaadeen ay yareeyaan iibsashada alaabta ceyriinka ah si loo yareeyo cadaadiska, taasoo yareyneysa awoodda wax soo saar ee xafaayadaha;
Midda kale ayaa ah in soosaarayaasha wax soo saarka ee dhammaaday ay la wadaagaan cadaadiska wakiilada, dukaamada iyo macaamiisha.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, kororka qiimaha dhamaadka tafaariiqda ayaa umuuqda lama huraan.
Dabcan, waxa kor ku xusan waa mala awaal. Dadka qaarkiis waxay u maleynayaan in mowjaddan kororka ah aysan sii waareyn karin, terminalkuna weli haysto agab uu ku taageero, sicirka kororka ee alaabada la soo dhaafayna aysan imaan karin. Waqtigan xaadirka ah, ma jiraan soosaarayaasha wax soo saarka ee soo saaray ogeysiis kordhinta qiimaha.
Waqtiga boostada: Abriil-07-2021